Martinika: Sarimihetsika “Think Like A Man”, Afa-tsy Ao Frantsa Ihany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2012 14:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, bahasa Indonesia, বাংলা, srpski, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Español, English
Fanavaozam-baovao: 23 Mey 2012, 9:20 pm Takatray ny filazana avy ao amin'ny vohikala Allo Ciné cinema fa “hivoaka tsy ho ela” araka ny efa voasoratra elaela ihany ny sarimihetsika “Think Like a Man” . Miala tsiny ho an'ny mpampiely ny sarimihetsika, araka ny fanambarana ato, milaza fa tsy nisy mihitsy fikasana famoahana daty (voafaritra) ivoahany amin'ny teny frantsay. Avy amin'izay, rehefa tsy “nofoanana” ny famoahana ny sarimihetsika afro-amerikana amin'ny ankapobeny, raha miteny izany fotsiny, matetika izy ireny no tsy nivoaka tsy nisy fanazavana matetika. Antony iray mety mahatonga izany ny rafitra fampielezana ny sarimihetsika: tsy manana famoahana manokana ny orinasa vaventy; mamoaka sarimihetsika an-jatony eny amin'ny efitrano fandefasana sinema ry zareo, na tsy mamoaka mihitsy. Ny orinasa madinika no mety mamoaka “arty” films izay mety hahazo mpanatrika any amin'ny efitrano tsy miankina mandefa sinema. Tsy manana rafi-pampielezana na trano manokana mandefa sinema ny vondro-piaraha-monina Frantsay-afrikana ao Frantsa, angamba noho ny fandrarana ao amin'ny firenena ny fanisana, ny fijerena ara-jeografia, ny fanaraha-maso na ny haitsena (dokambarotra) miankina amina foko na volonkoditra. Izay no mahatonga ireo liana na mankasitraka sarimihetsika Afro-amerikana matetika wtsy maintsy miandry ny fivoahan'ny lahatsary (video).
Herinandro vitsy monja taorian'ny adihevitra manodidina ny fifidianana Miss Black France (Oliravina Frantsa Mainty) 2012, lohahevitra hafa indray ankehitriny no mampiadihevitra ny frantsay teratany Afrikanina : ny fanemorana ny fandefasana ilay horonantsarimihetsika Amerikana “Think Like A Man” “Misaina toy ny lehilahy”.
Nahoana no lasa adihevitra eo anivon'ny frantsay ny horonantsarimihetsika Amerikana?
Mahagaga tokoa izany, ny valinteny anefa dia mijanona amin'ny hoe mainty hoditra avokoa ny mpilalao ao amin'ilay horonantsarimihetsika. Matetika omena tsiny ny sinema frantsay satria tsy mba ahitana karaza-poko misy ao amin'ny fiarahamonina frantsay ireo mpilalao filma. Na dia teo aza ny fahombiazana vao haingana tamin'ilay horonantsarimihetsika Les Intouchables (Ireo tsy azo kitihana), izay nahazoan'ilay mpilalao filma frantsay teratany Afrikanina Omar Sy ny loka Cesar ho an'ny mpilalao filma mendrika indrindra 2012, ka nireharehàna sy niteraka fanantenana teo amin'ireo frantsay mainty hoditra teratany Afrikanina sy Karaibiana, dia tsy nampiova zavatra be na maharitra izany.
Afisy lehibe momba ny Horonantsarimihetsika "Think Like a Man"
Taorian'izany fandresena tsy mankaiza izany, tsy mahalala henatra ilay mpamahana bolongana Martinikana Bondamanjak nanazava fa tsy tamin'ny fomba natoraly no nosafidianana an'i Omar Sy, fa noho ny habetsahan'ny mpijery ny horonantsarimihetsika.
Toy ny olona iray ny vahoaka Frantsay nanadino fa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra hofidiana hahazo ny loka Cesars i Omar Sy […] Fa tsy maintsy tafakatra hatramin'ny 19 000 000 ny isan'ny mpijery filma “Intouchables” vao nisy ngonongonona somary betsabetsaka hiarovana ity firafitry ny tantara miharihary fa ratsy ity ka naneken'ny tontolo mankandoan'ny sarimihetsika frantsay ity. Saingy aoka hatoky fa ity loka ity dia toy ny tsitaitaikana rano ao anaty tanihay mihamandroso.
Ahoana no hanazavana ny fidiran'ny resa-poko amin'ny horonantsarimihetsika?
Bilaogy Martinikana People Bo Kay namoaka indray ny fanadihadiana nalefa tao amin'ny pejy Facebook an'ny fampahalalam-baovao Negro, izay mitondra ny lohateny hoe “La France ne veut pas de couples de noirs dans les films“ (tsy tia filma mpisakaiza samy mainty hoditra i Frantsa). Niteraka hevi-baovao momba ny fiombonana (tsy misara-mianakavy) sy ny politika ao Frantsa izany fanadihadiana efa malaza ankehitriny izany, izay heverina ho milaza ny fandavana ilay filma.
Tsara ny manamarika fa manana paikady ara-politika-sosialy i Frantsa izay mampirona ho amin'ny fanaovana zafindraony kokoa fa tsy mankany amin'ny fanandratana antokon'olona mitovitovy. Tamin'ilay horonantsary ‘Think like a Man’, nasongadina ireo mpisakaiza samy mainty hoditra.
Araka ny voalaza tao amin'ny fanadihadiana, toy izao ny fanazavana hafa momba ny fandraràna horonantsarimihetsika Afrikana-Amerikana ao Frantsa (na dia eo aza ny tombotsoa azo avy aminy):
Mariho, Tsy mbola nalefa tamin'ny tranon-danonana fijerena horonantsarimihetsika ao Frantsa mihitsy ny horonantsarin'ilay mpilalao sady mpamokatra filma mainty hoditra Tyler Perry fa tonga dia mivoaka amin'ny kapila mangilatra DVD. Saingy fantatra amin'ny fanjakazakany any amin'ny tontolo fijerena sarimihetsika amerikana ity mpamokatra filma ity ao Amerika, toy ny filma ‘Why did I get Married'[nahoana aho no nanambady] sy ‘For Colored Girls’ [Ho an'ny Sipa Miloko <mainty>]. Tsy te-handefa sarimihetsika vokarin'ny mainty mahazo an-tapitrisany dolara mihitsy ny fiarahamonina frantsay ao anatin'ny fihatsaram-belatsihy amin'ny fanomezana marika tsara ho an'ny afrikana ampielezana noho ireo filma vitany.
Amin'ireo frantsay iray rà, mpiserasera frantsay Afrika-Karaiba hafa, tahaka ny fikambananan'ny vehivavy mpamahana bolongana La Scandaleuse niampanga ny antony tsy hanomezan-danja ny horonantsarimetsika sy ny “casting” amin'ny gazetiboky sasany malaza amin'ny sarimihetsika frantsay sy ireo tranokala;
Tsy mazava amin'ny Première.fr ihany koa ny antony mahatonga ny sarimihetsika ahitana mpilalao mainty hoditra ny ankamaroany mety ho loha-laharana ankifizin'ny be sy ny maro! Tsy misy mpilalao sarimihetsika fantatr'izy ireo, dia sahin'izy ireo ny manoratra azy ho “mampihomehy tahaka ny efa klasika tsy ahitana mpilalao sarimihetsika malaza (ilay mpihira Chris Brown no tena fantatra tamin'ny fitanisana ireo mpilalao doka-filazalazana ny sarimihetsika)”.’ Tsy maintsy fantarina tsirairay ve ny filma efa nilalaovan'ny mpisehatra tsirairay? Tsia satria asanareo izany
Araka ny voalazan'ny La Scandaleuse: ny tsy fahalalàna momba ireo mpilalao sarimihetsika Afrikana-Amerikana, na dia malaza manerantany aza no mampiavaka ny frantsay:
Angamba ao amin'ny firenena tahaka an'i Frantsa, izay zara raha mampiasa mpilalao sarimihetsika mainty hoditra, tsy maintsy talanjona ihany mahita ny fahombiazan'ny ‘Think Like a Man'! izay tsy atolotra ho toy ny sarimihetsika <Afrikana-Amerikana> na eo amin'ny mpilalao na eo amin'ny mpanatontosa izany, fa filma manerantany, , izay manazava ny fahombiazany eo amin'ny fahabetsahan'ny mpijery!
Nanamafy toy izao ny ampielezana Afrikanina Afrik.com:
Raha toy ny ratsy angon'antontan-kevitra ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny Première.fr dia noho ny ohatra iray ao anatin'ny maro amin'ny fandavan'ny tontolon'ny sinema frantsay hanolotra ny sarimihetsika mpilalao mainty hoditra no maro na mandà ny hihevitra fa mety hahomby izy ireny [hahazo mpijery maro]. Tsy tazana eny amin'ny trano fandefasana sarimihetsika frantsay velively itony “karazana” sarimihetsika itony, na amerikana izany na frantsay, amin'ny fitenenana fitsitsiana .
Ny sary nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, “Think Like a Man”, Afisy lehiben'ny sarimihetsika, nampiasaina tamin'ny alalaln'ny an Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Creative Commons license. Tsidiho Film_Poster's flickr photostream.